Xisbiga Kulmiye Maxey Shacabku Idinka ka Filayaan ? Cabdi raxmaan Ibraahim Cabdilaahi | Awdalmedia.com
Xisbiga Kulmiye Maxey Shacabku Idinka ka Filayaan ? Cabdi raxmaan Ibraahim Cabdilaahi
Thu 23 November 2017.
Waxaan ku faraxsanahey in xisbiga Wadani ay si Waayeelnimo ah oo ay waliba geesinimo iyo xilkasnimo ku dheehan tahey u aqbaleen natiijaddii ama goaankii GUDDIGA Doorashooyinka qaranka ileyn waa tii la yidhi garri laba nin kama wadda qosliso eh.
Wadankani mustaqbal siyaasadeed buu leeyahey, wuu dhismayaa dabcan khaladaad wey jiraan, laakiin waxaan u baahanahey in aan khaladaadka aan isla eegno dabadeedna saxno. Midna Meesha Halaga saaro qabiil -qabiil qabsadey ma jirto; Qolo-qolo ka adkaateyna warkeedaba dhaaf.
Xisbiyadda qaranka cid gaar u leh Majirto ; Xisbiga WADANI cid gaar u lehi ma jirto muwaadiniinta goboladda Soomaaliland oo dhami wey u codeeyeen. Codkii baa uun lagu kala batey mooyee wax kale oo dhib ahi majirto.
Dhinaca kale Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye Iyagana waan ku hambalyeynayaa sida wacan ee ay yeeleen; meysan buuqin, meysan damaashadin, taasina waxa ay aniga ii muujineysaa ama ay i tuseysaa in shacbi weynihii Soomaaliland bislaadey oo biseyl siyaasadeed la gaarey.
Dhinaca kalena xisbiga Kulmiyana sidoo kale cid gaar u leh ma jirto; Soomaaliland oo dhami wey u codeeyeen. Hadaba, waxaa xisbiga Kulmiye looga fadhiyaa dadkii xisbiyadda kale u codeeeyey in ay kasbadaan.
Waxaan hogaanka Kulmiye fari lahaa in shakhsiyaad ka tirsan xisbiga WADANI oo marka leysla eego ee dhinacyo badan laga eego tayadooda, xil kasnimadda, wadaninimadda, sumcaddiisa shakhsi ahaaneed la fiiriyo ama xirfadiisa shaqo iyo waaya aragnimaddiisa in lagu qanciyo in loo magacaabo xilal sarsare si loo dhiso dawlad midnimo qaran.
Midda kale; Waxaan kula talinayaa xisbiga Kulmiye in doorashadan ta xigta, waxaan filaynaa in ay tahey doorashaddii baarlamaanka iyo tii dawladdaha hoose eh; in ay qabtaan doorasho tusaale u noqota jiilasha soo socda oo taariikhi ah si aynu u iibino biseylkeena siyaasadeed, hogaamineed dimuqraadiyadeed xitaa haddii xisbiga Kulmiye lagaga badinayo baarlamaanka iyo dawladdaha hooseba. Waxaan leeyahey waad liqeysiin goaankaas; Maxaa yeeley waxaan leenahey hadaf; waxaa kale oo aan dooneynaa in aan nooleyno oo aan dardar galino rajada shacabka iyo waliba kalsoonidda shacabku ku qabaan dimuqraadiyadda iyo guddiga doorashooyinkaba.
Kulmiyoow dawlad ka duwan kuwii hore aan u soo aragney oo professional ah in aad magacawdiin ayay shacabku idinka sugayaan.
Cabdi raxmaan Ibraahim Cabdilaahi